Ilali yaseDalton-Phakathi kwehlathi lepine - I-Airbnb
Ilali yaseDalton-Phakathi kwehlathi lepine
Igumbi lakho lokulala e indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguRyan
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRyan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Dalton eseTirthan igcinwe phakathi kwehlathi elincinci lepine, ecaleni komlambo omncinci, ekude nesiphithiphithi sesixeko. Indlu esemaphandleni epheleleyo yenziwa ngodaka kunye neendonga zamatye kunye nezinto zendalo. Ukufika kwindawo yethu ethandekayo ukusuka kwindlela ephambili/ukupaka kuthetha ukuba uhamba imizuzu eyi-10 ukuya ehlathini lepine.
Indawo yethu inamagumbi ama-4 eendwendwe kuwo onke anekhitshi eliqhelekileyo cum dinning space. Sisebenzela ukwakha enye iseshoni kungekudala kwelinye icala lomsinga. Siyazithanda iingokuhlwa malunga nomlilo ovuthayo kunye nomculo opholileyo. Ngamathub’ athile siye senze izoso ukuba imozulu iyasivumela. Sikwanazo nezidlo ezimangalisayo nezinempilo ezifumanekayo kwipropathi. Ukuzigcina uxakekile kukho imidlalo yebhodi emininzi kunye nemidlalo yangaphandle onokukhetha kuyo. Kwakhona ithala leencwadi elincinane kakhulu esilikhulisayo kangangoko sinako. Siyakuthanda ukupheka kunye nokusingatha iindwendwe ngendlela eyahlukileyo eDalton's
Okokugqibela likhaya eli..ungalibiza elakho.
Sinendawo emangalisayo yokubetha apho i-cottage yaseDalton ikhona. Sinomlambo onqumla kwipropati. Sifumana imifuno yamaxesha onyaka emitsha kubamelwane bethu kunye nomgubo omtsha osuka kweyethu indawo yokusila. Kukho iinkukhu ezisi-8 ezijikeleza ngokukhululekileyo kwipropathi esinika uluhlu lwasimahla lwamaqanda enkukhu
Ngokwesiqhelo ndikwipropathi unyaka wonke, ndibamba indwendwe, ndipheka, ndilima kwaye ndakha ikhaya elingcono. Kodwa ixesha lokuphumla ndimane ndisiya eDelhi okanye eGoa emsebenzini. UMartin indoda yethu ngoLwesihlanu (Uncedo) kwipropati iyamangalisa kwaye iluncedo. Uqeqeshelwe ukupheka isimbo sasekhaya. Yenza inkukhu emangalisayo, uRajma kunye noDal Makhani. Wenza nemifuno yasekuhlaleni emihle. Angathanda ukukubonisa malunga nepropathi kunye nendawo xa ndingekho. Ukuba unokufuna nantoni na ethile ukuba uyitye singathanda ukukulungisa ukutya kwethu ukuze kukulungele ngcono.
Ngokwesiqhelo ndikwipropathi unyaka wonke, ndibamba indwendwe, ndipheka, ndilima kwaye ndakha ikhaya elingcono. Kodwa ixesha lokuphumla ndimane ndisiya eDelhi okanye eGoa emsebenzi…